IMill View Lodge, eLismore.
Le 200-ubudala "Ikota yoMsebenzi" indawo yokuhlala yaseBallyin House, ijonge ngqo kwiNqaba yaseLismore phezu koMlambo iBlackwater; Yeyona ndawo ifanelekileyo yokuzisekela ngexesha lotyelelo lwaseIreland yaMandulo. I-Lismore yidolophu emnandi egcwele i-rustic charm kwaye ifanelekile ukuba ufumene umsitho weBlackwater Valley Opera Festival, i-Immrama Writers Festival, i-International Hunter Trials, iSt Declan's Way okanye njengesiseko sokuphonononga kunye nokufumanisa le ndawo yomlingo. .
Le ndawo yokuhlala ibonelela ngamava awodwa okuhamba emanyathelweni embali kwindawo eyonwabe kakhulu. Indawo, kumgama wokuhamba wedolophu yaseLismore; ilungele ukuva yonke imisebenzi yaseLismore kunye neendawo eziyingqongileyo. Kungenjalo, kufanelekile ukuntywila eluxolweni lwemihlaba kwaye wonwabele ubunewunewu beyadi ehamba ngasemva ejonge eBallyin Mill, iOrchard ebiyelwe ngodonga (ithuba lokondla iinkukhu) kunye neendlela ezininzi zokuzola.
Lo mmandla unamathuba amaninzi amangalisayo ohambo lweenkuni kunye neentaba, ukuloba, ukubukela iintaka, ii-oodles zeendawo zeepikiniki zabucala, ukuhamba ngebhayisekile, ukuhamba ngesikhephe kuMlambo iBlackwater, ukukhankanya nje ezimbalwa.....
Le ndawo yindawo enoxolo kakhulu.
Iindwendwe ziyakuhlangatyezwa xa zifika, okanye iindwendwe zingakhetha ukuzihlola ukuba ziyathanda.
Isidlo sakusasa sikwafumaneka kwi "Miss Anson Suite" yaseBallyin House. "I-Miss Anson Suite" ijonge ngqo kwiNqaba yaseLismore kwaye ijonge iGadi kunye nedlelo laseBallyin House. Ukubhukisha kuyafuneka. Kutheni ungaqali usuku lwakho ngokungena kwaye uphumle kwimbali ecocekileyo :-)
Isidlo sakusasa sikwafumaneka kwi "Miss Anson Suite" yaseBallyin Hous…